Transmission ibanga AMAKHABHILI ahlukahlukene ku-Video Surveillance
Ukudluliswa kwebanga lamadivayisi ahlukahlukene angaphandle ekuqapheni kokuphepha
Ulayini wokudlulisa awunwetshwanga inqobo nje uma ufuna. Uma lidlula ibanga lesisetshenziswa sokudlulisa, kungenzeka ukungajwayelekile okuhlukahlukene, ngakho-ke sicela uchofoze le ndatshana ngaphambi kokufaka izintambo ukuqonda ibanga lokudlulisela lamadivayisi ahlukahlukene angaphandle. Uma uneziphakamiso ezinhle, ungashiya umyalezo!
Amabanga angeniswe ngezansi amabanga e-theory, futhi indawo yangempela yezintambo izonqoba!
Ikhamera yokubhekwa kwevidiyo
1. Ikhamera yenethiwekhi
CAT5E: Ukudluliswa okungu-100M ngenethiwekhi eyi-100M
CAT6: Transmission Gigabit Network 100M
2 Ikhamera ye-Coaxial HDâ €
Indlela yokudlulisa: Ikhebula le-Coaxial
Akukho transceiver optical endaweni yesehlakalo
Uhlobo lwekhebula le-BNC
Kukhona ama-transceivers optical endaweni yesehlakalo
It is kunconyiwe to use a single-core coaxial cable, namely SVY75-5-1 or SVY75-3-1. Multi-strand copper wire is not kunconyiwe!
Indlela yokudlulisa: twisted pair
Nge-BNC ezinikele ekuguqulweni kwamapheya okusontekile, ibanga lokudlulisa lingaba ngu-200M.
Sebenzisa izintambo eziwugqinsi ngangokunokwenzeka ezintambo ezi-twist-pair, njengezintambo ezithathwe ezintanjeni ze-CAT-5e.
2. Ikhamera ye-Analog
1 Khombisa ibanga lokuhambisa idivaysi
Ikhebula le-VGA: theoretical 20M, when the transmission exceeds 20M, it is kunconyiwe to add a signal amplifier
Intambo ye-HDMI: theory 15M
2 Control imishini yokudlulisela ibanga
Ikhebula lesandiso se-Mouse: 10M.
Isilawuli kude: 10ï½ž20M endaweni engavimbelwe
Ungayikhetha kanjani ikhebula lomsindo?
Ngabe ukushaja ngebhange lamandla kuzolimaza ifoni? Iqiniso lilapha